Zero ဘ၀ ကနေ Forbes ရဲ့ ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အထိ အောင်မြင်မှု ရအောင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဘောလုံး အေးဂျင့် ဂုရုကြီး တစ်ယောက် နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း - SPORTS MYANMAR
မေး – ဂျိုနသန် ဘားနက် ဟာ အေးဂျင့် လောကထဲကို ရောက်မလာခင် အချိန်က ၊ ဘယ်မှ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ – ကျနော်က ကက်စီနို လုပ်ငန်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရုံထဲမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – ဘောလုံးလောကမှာ လုပ်ကိုင်ရတာ ပျော်ရဲ့လား။
ဖြေ – ပျော်တာပေါ့ဗျာ ။ အေးဂျင့် ဖြစ်မလာခင် ကတည်းက ပျော်တာပါ။ အခုတော့ စီးပွားရေး နဲ့ ဆက်စပ်လာတော့ ပိုပြီးတောင် အာရုံစိုက် ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ကျနော် ငယ်ငယ်ကတော့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် အဖြစ် ကြီးပြင်းခဲ့တာလေ။ အဖေရယ် ၊ အစ်ကိုတွေ နဲ့ အာဆင်နယ် ရဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းကို မလွတ်တမ်း ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့တာ အခုထိ မှတ်မိနေဆဲပါ။
မေး – ဒါဆိုရင် အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေ ထဲက အကြိုက်ဆုံး တစ်ယောက်ကို ရွေးပါဆိုရင်….။
ဖြေ – လီယန် ဘရာဒီ ပါ။ သူဟာ အရမ်းကို စကေးကောင်းသလို ၊ ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်ဝင်းဂါး လက်ထက် ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်တွေ နဲ့ ဗိုလ်စွဲတုန်းကလဲ ကျေနပ်ခဲ့ရသေးတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ် တုန်းကတော့ အာဆင်နယ် ဆိုတာ ဘာဖလားမှ မရတဲ့ အသင်းပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမှ ၊ ဆုဖလားတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်လာတာပါ။ အသက်ကြီးလာမှ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ကို မြင်ဖူးရတာပေါ့ဗျာ။
မေး – အေးဂျင့် လောကထဲကို ဘယ်လို ဝင်ရောက်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ – ကက်စီနို မှာတုန်းက ဒေးဗစ် ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကနေ ထွက်လာတော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိသေးဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သား လုပ်ငန်း တစ်ခုတော့ စကြမယ် ဆိုပြီး ၊ မီးဖိုချောင်လေးကို ရုံးခန်းလုပ်ရင်း စတင်ခဲ့တာပါ။ ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှလဲ မရှိဘူး ၊ Client လဲ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ တကယ့် အောက်ခြေ စစ်ကနေ စခဲ့တာ ဖြစ်သလို ၊ အရင်ဆုံး အင်္ဂလန် ခရစ်ကတ် ကစားသမားတွေ ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဖြစ်ကနေ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
မေး – အခုတော့ ဘောလုံးဟာ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းကြီး ဖြစ်နေပြီနော်။
ဖြေ – သေချာတာပေါ့ဗျာ………….
မေး – ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှာထားပြီး ၊ ဘယ်လို နေရာတွေမှာ သုံးလဲ။
ဖြေ – လူတွေက တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ခံယူချက်က မတူပါဘူး။ တစ်ချို့ က မိသားစု က ပထမဦးစားပေးဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြသလို ၊ တစ်ချို့ ကတော့ ကျန်းမားရေး ကို ပိုပြီး မြတ်နိုးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိတာလဲ တစ်မျိုးကောင်းတာပဲ မဟုတ်လား။
ပိုက်ဆံ လက်ထဲရှိနေရင် အလှူအတန်းတွေ လုပ်ချင်တဲ့ အချိန် လုပ်လို့ ရသလို ၊ လူတွေကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလို့ ရပါတယ်။ ကျနော် ဆိုရင် ဂျူး မျိုးဆက်ကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သူပါ။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ချို့တဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အထောက်အပံ့ ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အမြဲတမ်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် ညီတစ်ယောက်လဲ အသက် 18 နှစ် နဲ့ ဆုံးပါးခဲ့တာလေ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ ရဲ့ တန်ဖိုးကို ကျနော်က ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ထားပါတယ်။ နောက်ဆုံး အခမဲ့ ကလေးဆေးရုံ တစ်ခုတောင် ကျနော်တို့ တည်ထောက် ထားပါတယ်။
မေး – ဘောလုံး သမားတွေ အတွက် ဘာလို့ အေးဂျင့် လိုတာလဲ?
ဖြေ – ကလပ် အသင်းတွေက သူတို့ကို ငွေပဲ လစာ အဖြစ် ပေးတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ ကို စောင့်ရှောက်မှု မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့က အဲဒီ တာဝန်ကို ယူရတာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ကြည့်ရတယ် ၊ စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းတွေ မှန်းဆရတယ်။ ကစားသမား ဘ၀ က အနားယူတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် လက်ထဲမှာ မတောင့်မတ နဲ့ နေနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက်လဲ ကျေနပ်တယ်ဗျာ။ 1966 ခုနှစ် ဝန်းကျင်က အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ကလပ်အသင်းတွေက ဆက်ပြီး ချမ်းသားခဲ့တယ် ၊ ဖီဖာကလဲ ငွေကြေး ခိုင်မာတဲ့ အသင်းကြီး အဖြစ် ဆက်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အင်္ဂလန် အသင်းကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့ ကစားသမား 11 ယောက်ကတော့ ဘ၀ ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ ချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့တောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့လို အေးဂျင့် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တစ်ခုက ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
မေး – ဒါဆိုရင် ဘောလုံးသမားတွေ ရဲ့ မိဘတွေ လို့တောင် ပြောလို့ ရနိုင်မလား၊
ဖြေ – စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာလို့ သုံးနှုန်း ရင် ပိုပြီး မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ နဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ အကြားမှာ တစ်အားကြီး ရင်းနှီးနေစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ်ငန်း သဘောအရ လေးစားမှု အပြည့်ပေးမယ် ၊ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ပြောစကားကို နားထောင်မယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
မေး – ရွိုင်းအိုလာ နဲ့ မန်ဒက် အပေါ်ရော ဘယ်လို မြင်လဲ။
ဖြေ – ရွိုင်းအိုလာ နဲ့တော့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးပါတယ်။ မန်ဒက် နဲ့က လုပ်ငန်းတူ မိတ်ဆွေတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဟာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ကြပုံ မတူပါဘူး။
မေး – အဲဒီ အေးဂျင့်တွေက ခင်များ ရဲ့ Client တွေကို လုယူသွားတာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးလား။
ဖြေ – ကျနော်တို့ အကြားမှာတော့ လုံး၀ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အေးဂျင့် ပေါက်စ တွေကတော့ ရှိပါတယ်။ ဘောင်ကျော်ပြီး လုပ်တာတွေ ၊ လေထွားထွား နဲ့ ပြောပြီး ဆွဲယူသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အချိန်တန်တော့လဲ နာမည်ကြီး ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် ၊ သူတို့အတွက် တကယ် နိုင်နိုင်နင်းနင်း နဲ့ ကိုယ်စားပြုပေးနိုင်မယ့် အေးဂျင့်မျိုး နဲ့ပဲ လက်တွဲကြတာပါ။
မေး – ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသမျှ ထဲမှာ ဘယ် ကလပ်ရဲ့ ဥက္ကဌ ကတော့ လက်ပေါက် အကပ်ဆုံးလဲဗျာ။
ဖြေ – တကယ် ပြောရ ဆိုရတာ ကောင်းတဲ့ ဥက္ကဌတွေလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ ပြသနာ မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ရတာ ခက်တယ် ဆိုရင် ဥက္ကဌ ဘက်ကတင် မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျနော်လဲ အဲဒီလို လူစားမျိုးပါ ။ ဒါကြောင့် အချိန်တွေ အကြားကြီး ဆွေးနွေးကြ ၊ အော်လိုက် ဟစ်လိုက် ၊ ငြင်းလိုက်နဲ့ ၊ နောက်ဆုံး Point တစ်ရောက်သွားလို့ သဘောတူညီမှု ရပြီ ဆိုရင်တော့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြတာပဲလေ။
မေး – စပါး ဥက္ကဌ ဒန်နီရယ် လီဗိုင်း က အပြောင်းအရွှေ့ စကားပြောရတာ လက်ပေါက် ကပ်လွန်းတယ် ဆို။
ဖြေ – တွေ့ဖူးသမျှ ထဲမှာတော့ အပေါက် ဆိုးတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူကလဲ ဘောင်ထဲကပဲ ပြောတာပါ။ သူ့ကလပ်အတွက် အမြဲတမ်း ရှေ့တန်း တင်သလို ၊ ကျနော်ကလဲ ကစားသမားအတွက် နံပါတ်တစ်ပါ။ တစ်ခု ကောင်းတာက သူနဲ့ သဘောတူညီမှု ရပြီ ဆိုတာနဲ့ စာချုပ် စာတမ်းတွေ ချက်ခြင်း လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ အဲဒီလောက် အထိ ကတိတည်တဲ့ လူစားမျိုးပါ။
မေး – ရီးရဲ ဥက္ကဌ ပီရက် ကရော…….
ဖြေ – အတူတူပဲဗျာ…….သူလဲ စကားနဲ့တင် ပြီးအောင် လုပ်တဲ့သူပါ။ ဆွေးနွေးရတာ ခက်သလို ၊ ဘောလုံး အကြောင်းလဲ အများကြီး နားလည်ထားတဲ့ သူဗျ။ အခန်းထဲကို သူဝင်လာပြီ ဆိုတာ နဲ့ ဥက္ကဌကြီး ဆိုတဲ့ အသိမျိုး ဝင်လာနိုင်တဲ့ အထိ အရှိန်အဝါ ကြီးလွန်းတဲ့သူပါ။ ကတိတည်သလို ၊ ခင်ဖို့လဲ ကောင်းတဲ့သူပါ။
မေး – ရိုနာဒို ဟာ ရီးရဲ ကနေ ဂျူဗီ ကို ပြောင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ ၊ မန်ဒက် က ပွဲခ ယူရို 10 သန်း သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မများလွန်းဘူးလား………။
ဖြေ – ကျနော်လဲ ပိုက်ဆံ မရပဲ နဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကြီးကြီးမားမားတွေကို မလုပ်ချင်ပါဘူး။